Torohevitra ho an'ny fiampitana ny sisin-tany ho any Kanada
Torohevitra hoentina mandeha amin'ny sisin-tany mankany Canada
Tian'izy ireo ny mandeha amin'ny sisin-dalana mba handeha tsara. Ny fomba tsara indrindra ahazoana antoka fa mitranga izany dia ny mahafantatra ny zavatra andrasana sy ny fiomanana. Mandeha matetika any amin'ny sisintanin'i Kanada / Etazonia aho ary ahitana ny toro-hevitra ambony homeko an'ireo olona miampita sisin-tany any Kanada.
1. Fantaro hoe inona no ilainao
Ny mpitsidika rehetra tonga eto Canada dia mila pasipaoro na pasipaoro , afa-tsy ny ankizy .
Ireo fepetra henjana ireo dia napetraka teo ambanin'ny Empira ambin-dalambin'ny Tandrefana (WHTI) tamin'ny taona 2009.
Raha mandeha haingana ianao, afaka mahazo pasipaoro ao anatin'ny 24 ora miaraka amin'i Rushmypassport.com.
Fantaro bebe kokoa momba ny ID ilaina mba hiampitana ny sisintany Kanada .
2. Vonona ny hamaky ny mpiambina sisintany
Ny mpandeha dia tokony handalo ny pasipaorony sy ID hafa amin'ny mpamily alohan'ny hidirana amin'ny trano fonenana sisintany. Ankoatra izany, esory ny solomasonao, esory ny radio sy finday - aza manomboka manao ireo asa ireo rehefa tonga any amin'ny trano.
3. Manaova fanamarihana ho an'ny ankizy mitsidika tsy misy ray aman-dreny
Ny olon-dehibe mandehandeha any amin'ny sisintanin'i Kanada miaraka amin'ny ankizy izay tsy azy manokana dia tokony hanoratra taratasy avy amin'ireo ray aman-dreny na mpiambina izay manome alalana ny ankizy hiala ao amin'ny firenena. Ny fahazoan-dàlana dia tokony hampidirina ny anarana sy ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny / mpiambina.
Na dia miaraka amin'ny zanakao aza ianao fa tsy ny ray aman-dreny hafa, dia mitondra hevitra ny fahazoan-dàlana nomen'ny ray aman-dreny iray hafa haka ilay zaza eo amin'ny sisintany.
Vakio bebe kokoa momba ny fitondrana ankizy any amin'ny sisintanin'i Kanada .
4. Fantaro izay azonao ary azonao atao ny mitondra any Kanada
Jereo ny Inona no azoko atolotra an'i Kanada amin'ny antsipirihany mikasika ny mety ho azon'ireo mpandeha an-tongotra mankany amin'ny sisintanin'i Kanada.
Na manontany tena ianao raha afaka mitondra biby fiompy any Kanada , firy ny alikaola sy sigara azonao , na ireo fepetra hentitra amin'ny fihazana basy sy sambo, fantaro ireo fitsipika momba izay azonao ka tsy afaka mitondra any Canada alohan'ny hanehoana anao ao amin'ny trano fonenan'ny Border.
5. Manorata ny lisitry ny fiara misy anao
Ireo manamboninahitra sisintany dia eo am-pitadiavana fiara nangalatra na olona miezaka ny hisoroka ny asany amin'ny fiaramanidina novidina avy any amin'ny firenena, noho izany dia manana hevitra tsara ny fisoratana anarana ao an-tanana.
6. Mamaritra / Mameno ny fitoeranao
Ny zavatra tsy ilaina ao amin'ny trompanao dia mety ho loharanom-panontaniana avy amin'ireo manampahefana sisintany ary mety hanampy fotoana hiatrehana ny sisintaninao. Ohatra, lozam-pifamoivozan-drivotra mivaivay dia mety mahatonga ny mpiambina sisintany hanontany tena raha tonga any Canada mba hiasa.
7. Miomàna hamaly fanontaniana
Ny mpiasan'ny Sampan-draharaha sisintany ao amin'ny sisintany Kanada / Etazonia dia hangataka fanontaniana maromaro toy izao, toy ny hoe: "Hafiriana ianao no ho any amin'ny firenena?" "Nahoana ianao no mankany Kanada?" ary "Inona ny adiresin'ilay toerana hipetrahanao?" Valio ireo fanontaniana ireo. Tsy fotoan-tsarotra ho an'ny tsy fahampian-tsakafo izany.
8. Arovy ny Receipts Handy
Raha nanao fivarotana maromaro tany Etazonia ianao na fivarotana maimaim-poana any amin'ny sisintany, tehirizo ireo tapakila ireo raha toa ka manontany azy ny manampahefana sisintany.
Ireo zavatra izay matetika mitondra andraikitra sy hetra mavesatra any Canada, toy ny liquor sy paraky dia mety ho ny antsasaky ny vidin'ny sisintany. Azo ampiasaina koa ny sigara Kiobana. Ny mpivarotra dia tsy maintsy mandany ny zavatra vidiny amin'ny tsy manan-danja raha izy ireo any Canada.
Aoka ho fantatra ny fetran'ny famokarana, ny paraky sy sigara, ary ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny mpitsidika mamakivaky ny sisin-tanin'i Etazonia / Kanada.
Maro ireo fivarotana maimaim-poana tsy manan-kialofana no manana kianja ara-tsakafo sy tolotra hafa, saingy tsy ny fivakivaky sisintany rehetra no manolotra fivarotana tsy misy adidy.
9. Manongilava ny fiara sy ny fiara miverina
Rehefa tonga ao amin'ny trano fandefan'ny batery Canada, dia atsangano ny varavarankely eo anoloanao sy aoriana mba tsy hiteny amin'ny mpamily fotsiny ny manampahefana sisintany fa alefaso amin'ny olona mipetraka any ambadiky ny fiara na koa mahita izay any aoriana.
10. Jereo ny fandefasana ny sisin-tany mialoha ny hiampitana
Alohan'ny hamakivakiana ny sisintanin'i Kanada, jereo ny fotoana miandry ny sisintany. Indrindra raha azonao atao ny mifidy avy amin'ny sisin- tany roa na telo, toy ny ao amin'ny Niagara Falls , mijery ny fotoana andrasan'ny sisin-tany an-tserasera mba hamonjena ny ora fitsangatsanganana.
Fiaran-dalamby Scenic Across Canada
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba ny vola any Canada
The 10 Best Places to See Fall Fall in Canada
Kanada amin'ny ririnina
Andro iraisam-pirenena ho an'ny ady totohondry any Kanada
Fiarovana ny zotra any Asia
LGBTQ tsara indrindra sy hotely Gay ao amin'ny Vancouver, BC
Fitsidihana mpitari-dalana ho an'i Cordoba, Espaina
Momba ny Golf Travel Guide ho an'ny New York Golf Trail
5 Ny antony mahatonga ireo mpandeha dia tsy tokony hatahotra antsantsa
Fête Nationale 2018: Mankalaza ny Saint-Jean ao Montreal 24 Jona
Zavatra hijerena sy atao any amin'ny Centre Rockefeller
Lisitr'ireo hevitra momba ny fitsangatsanganana ho an'ny ankizy any aloha
Toronto ho an'ny karazan'olona rehetra